July | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
မေတ္တာနိုင်ငံရေးနှင့် သားတရား စီရင်ခန်း
July 31, 2017 drkokogyi
အတော်တော့ စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသည့် စကားများ ဖြစ်လိမ့်မည်။
မြန်မာ့နွေဦးဝယ် နောက်ပြန် လန်မလားစိုးရိမ်ကြရင်း ကိုယ့်ဘက်က လူများ
တဖဲ့ဆီ အခြွေခံနေရသည်လားဟုတောင် ထင်လာရသည်။
လေဆိပ်မှာ လူပုံအလယ်လုပ်ကြံခံလိုက်ရသော ဦးကိုနီမှ
” ပြည်ထောင်စု ကို လုပ်ကြံခဲ့ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ”
July 31, 2017 July 31, 2017 drkokogyi
” ပြည်ထောင်စု ကို လုပ်ကြံခဲ့ကြတာ ဘယ်သူတွေလဲ “
ခုကာလ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးခေါင်းစဉ်တပ်ထားပေမဲ့ မအလတို့စစ်အုပ်စုဟာ သည်းကြီးမည်းကြီး တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ဖိနှိပ်မှုနဲ့၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီအပေါ် ရန်လိုမှုတွေ ရပ်မသွားသေးဘူး။
အံ့သြစရာကောင်းတာက ဒီတိုင်းပြည်မှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်စေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကြီးတခုဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွတ်လပ်ရေးအုတ်မြစ် ပင်လုံစာချုပ်ချိုးဖေါက်မှု မှာ မတရားတဘက်သတ်ခံခဲ့ရတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ချိုးဖေါက်တဲ့ စစ်အုပ်စု ရှိခဲ့တယ်။ ပြည်သူ့ပါတီ ဆိုပါတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ NLD ဟာ နှစ် ၂၀ ကျော်ကြာတိုက်ပွဲအလွန်မှာ မတရားခံရရသူတွေဘက်က မရပ်တည်ဘဲ ဖိနှိပ်သူ စစ်အုပ်စုရပ်တည်ချက်အတိုင်း ရပ်တည်သွားခဲ့တယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စ- တန်းတူညီမျှရေး တရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စ- ဒါတွေသေချာမှုမရှိပဲ……ဖက်ဒရယ်တို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ဘဲပြောနေလို့ – အဲ့ဒါတွေ ရလာတဲ့တနေ့…တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကြီးဝါဒ ပေါ်လာမှာဘဲ
ဖက်ဒရယ်….တို့…ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ အကြီးအကျယ်ပြောနေကြတယ်….
တန်းတူညီမျှရေး….တရာဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စ…..
ဒါတွေသေချာမှုမရှိပဲ……ဖက်ဒရယ်တို့…ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တို့ဘဲပြောနေလို့…
အဲ့ဒါတွေ ရလာတဲ့တနေ့…….တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကြီးဝါဒ ပေါ်လာမှာဘဲ…..
မန္တလေးမှာ ရေတွေတိုးနေတယ်ဆိုတော့ – ဖခင်ကြီး(ပါပါ့)ကို သတိရမိတယ်
အခုလို ရေတွေတိုးပြီဆိုရင်….ညနေစောင်းတိုင်း…မိသားစုကို ကားပေါ်တင်ပြီး
တရက် မတ္တရာလမ်းဖက်…နောက်တရက်…ကျွဲစွန်းနဲ့ဂေါဝိန်…နောက်တရက် စစ်ကိုင်းလမ်းတလျှောက်…..နေရာကို အစုံပါဘဲ……
ဘိုကျော်ငြိမ်း ဆိုတဲ့ လူဟာ မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန် ပြည်ဖျက်နိုင်ငံရေးအမှိုက်ပါပဲ။ ခုကို မဘသနဲ့ တသားထဲ လုပ်နေတာ ကြည့်ပေတော့
July 30, 2017 drkokogyi
” ကျနော် က အချက်အလက် လွဲ ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့
ခင်ဗျားလို အမှားကြီး မှားနေသူ မဟုတ်ပါဘူး ”
ဘိုကျော်ငြိမ်း ဆိုတဲ့လူ တခုတ်တရ ကျနော့်ကို တိုက်ခိုက်နေလို့ ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်ရာ ပြန်ရေးတာပါ။
Ko Tun Lwin with Swe Mon.
ကို Swe Mon ပိုစ့်ထင်တယ်…. ထိမိချက် က ဗုဒရှ် တွေ တောင် copy ယူတင်နေကြပြီ…. လေးစားပါတယ် ကို Swe Mon 😊
လွှတ်​​တော်​ကိုယ်​စားလှယ်​ရဲ့ တာဝန် ???
July 29, 2017 July 29, 2017 drkokogyi
ကိုယ့်​ဟာကို အစည်းအ​ဝေးတစ်​ထိုင်​တည်း လုပ်​ပြီး
ကိုယ့်​ဟာကို တထိုင်​တည်း ဆုံးဖြတ်​
ပိုင်​ရှင်​ဘယ်​သူမှန်း မသိတဲ့ သူများအိမ်​ကို ဘက်​ဟိုးနဲ့ထိုးပြီး တစ်​ညတည်း အပြီး ဖျက်​ခွင့်​လည်း ပါသကိုး
ဥပ​ဒေတို့ … တရားရုံးအမိန့်​တို့ လိုကို မလို … ရဲ​တွေကလည်း ၀ိုင်း​ပေး ၀န်း​ပေးလို့ … ဘုန်းကြီး​တွေလည်း အိမ်​ဖျက်​ထဲမှာ ပါ​သေးသဗျားးးး